I-canape yoshizi wembuzi notamatisi oswidi | Bezzia
I-canape yoshizi wezimbuzi bese uthumela utamatisi
Ngabe ufuna i- isikhalazo esilula onyakeni omusha olandelayo ka-Eva? Le canape yoshizi wezimbuzi notamatisi kwaba yinto enkulu etafuleni lethu langoKhisimusi. Ukulungiselela ngeke kukuthathe isikhathi eside futhi ungakwenza futhi ngaphambi kwesikhathi.
Siyaluthanda lolu hlobo lwama-canapés asivumela ukuthi silungiselele ingxenye ngayinye kusengaphambili ukujabulela izivakashi ngaphandle kwengcindezi. Kulokhu kuzodingeka ulungiselele kuphela Utamatisi oswidi futhi iningi lomsebenzi uzokwenzelwa i-ovini.
Ukunambitheka, ukuthungwa nephunga lala matamatisi amnandi kumnandi. Ungazisebenzisa ezitsheni eziningi: ipasta, ilayisi, amasaladi, imihlobiso .. Zigcina efrijini esitsheni esingena moya kuze kuphele izinsuku ezi-3 noma ezi-4. Kuhlanganiswe noshizi, kuyindlela enhle yokuqedela itafula lokugubha, zama!
I-500 g yamatamatisi
Tincetu ezili-12 zesinkwa
Tincetu eziyi-12 ezincanyana zeshizi lembuzi
Ngaphambi kokushisa ihhavini ngo-180 ° C.
Geza utamatisi bese uyomisa kahle. Beka ku isitsha esiphephile sehhavini ukuze banikeze okunwetshiwe, ngongqimba owodwa.
Faka ama-clove kagalikhi ngaphandle kokuxebuka, uwoyela owengeziwe we-olive, i-sprig ye-rosemary, ingcosana ye-oregano eyomile nosawoti nopelepele.
Hlanganisa konke kahle futhi bhaka ngo-180ºC kuze kube yilapho utamatisi ushwabene ngaphandle futhi kuthenda ngaphakathi, cishe imizuzu engama-40.
Bayeke bafudumale futhi uma ungeke uzisebenzise masinyane zigcine efrijini.
Ukulungisa ama-canapes toast isinkwa epanini lokuthosa elinamafutha omnqumo amancane.
Bese ubeka kulezi, kusashisa, a ucezu lweshizi umqulu wembuzi.
Endaweni yoshizi utamatisi we-cherry amathathu ufafaze kancane ujusi katamatisi noviniga webhalsamu.
Jabulela le canape yoshizi wembuzi notamatisi oswidi kufudumele noma kubanda.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ungadliwa » Iziqalo » I-canape yoshizi wezimbuzi bese uthumela utamatisi
Amathiphu wokulawula imizwa
Izitayela zezinwele zochungechunge esifuna ukuzigqoka